Icho hachisi chakavanzika vatengesi vepamusoro zana vepasi vanogona kutora epamusoro uye yakasimba email email kushambadzira software nekuti vane makuru, akazvitsaurira e-commerce zvikwata kuti vadzidze huwandu hwakawanda hweanoshanda eanoshanda kuuraya. Kune zvakare akawanda emuno neatunhu epamhepo vatengesi vasina timu yakazvipira yekutengesa mune dzakawanda zviitiko. Zvakakosha kune vatengesi kuti vawane mari pakubudirira email inounza ku e-commerce, asi ivo vari kuda chikuva chinopa izvo zvakakosha zvekureruka kwekushandisa uye nekukurumidza kunyorera.
Iyo software's chaiko-nguva yekutenga ngoro kusangana inosanganisa vatengesi vepamhepo mukusimudzira zvigadzirwa zvigadzirwa, kugadzirisa zviitiko zvevatengi, uye kutaurazve kune vatengi vese kuburikidza neakazvimirira, emaimeri emaemail. Delivra Commerce inoita kuti vashandisi vagadzire vega zvikamu zvichibva pane yakawiriranwa yekutenga data kubva Magento uye WooCommerce Mapato, kana Shopify mhando dzechigadzirwa, kuyambuka-kutengesa chigadzirwa uye kuitazve zvekare vatengi vekare. Pamusoro pezvo, vashandisi vanogona kuteedzera mari yekupihwa kubva kuemail kuronga nzira dzekutumira mune ramangwana uye nyore kutumira mameseji akasiyiwa engoro kuti vadzore mikana yemari uye kuwedzera kushambadzira kweemail ROI.
Yevashandisi yakatarwa yekutenga ngoro kusangana inoburitsa otomatiki zvikamu zvinoenderana nekutenga kubva kuchikuva zvikamu kana zvigadzirwa zvigadzirwa.
Chimwe chinhu chakakosha kugona kugadzira "mureza chiitiko" zvichibva pakutenga kubva pakutumira tsamba, zvichibvumira vashandisi "kumisikidza uye kukanganwa" makomisheni akazvimirira vachidzora nguva uye meseji yekutaurirana zvine chekuita nezvekutengeserana. Zviitiko zvine mureza zvinobvumidza mushambadzi kuti aongorore zviyero, uye bazi danho rekufamba-famba munzira mbiri. Semuenzaniso, mushambadzi anogona kusarudza kuongorora kana kwete iye anogamuchira akavhura tsamba, akabaya pane imwe link, yakatengwa kubva kue-commerce chitoro, nezvimwe. Zviitiko zvine mureza zvakakosha nekuti zvinobvumidza mutengesi kudzora zvichaitwa zvinotevera kune iye anogamuchira, zvichibva pane zvakaitwa neanogamuchira kana kusaita. Mushambadzi anogona kusarudza kutumira maemail akasiyana, kugadzirisa data data kana kutumira mameseji eSMS.